‘नर्क’बाट उठेर सुधार अभियान
पवन बराइली काठमाडौं, ३१ वैशाख
कुनै बेलाका नामुद लागूऔषध प्रयोगकर्ता हुन्, सम्राट सिंह । ललितपुर गोदावरीका सम्राटले लागूऔषध प्रयोग गरेकै कारण जीवनमा खुब सास्ती पाए । तीन दशकअघिसम्म दुव्र्यसनीका कारण ‘नर्कझैं’ जीवन भोगेका सम्राटको दैनिकी फेरिएको छ । उनी अहिले लागूऔषध दुव्यर्सनीमा फसेकाको उद्धारमा सक्रिय छन् ।
विगतमा भोगेको पीडाबाट पाठ सिक्दै सम्राटले गोदावरीमै ‘मुक्तिदय सुधार केन्द्र’ स्थापना गरेका छन् । जहाँ लागूऔषधमा फसेका १५ युवा नयाँ जीवनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । सम्राट दुव्र्यसनीमा फसेकालाई पाठ सिकाउँछन् ।
पहिला दुव्र्यसनीमा चुर्लम्म डुबेका सम्राट सहजै अहिलेको स्थितिमा आइपुगेका होइनन् । उनको जीवन कथा यस्तो छ ।
यसरी फसे दुव्र्यसनीमा
मदिराप्रेमी बुबा र घरमा भइरहने पार्टीका कारण उनले कलिलै उमेरमा लागूऔषध चाखे । ‘घरमा प्रशस्त विदेशी रक्सी आउँथ्यो । पार्टी हुन्थ्यो,’ सम्राट सम्झन्छन्, ‘बुबाका साथीले मलाई रक्सी पिउन उक्साउँथे । म पिउँथें ।’
चाख्दा चाख्दै उनी मज्जाले पिउने भइसकेछन् । रक्सीसँगै चुरोट पिउने बानी पर्यो । केही समयमै उनलाई रक्सी नभए निद्रै नलाग्ने भयो ।
‘रक्सी र चुरोट पिउँदा मात्रै मज्जा आउने भइसकेछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि घरबाट लुकीलुकी साथीसँग पिउन थालियो ।’
सम्राटले साथीभाइको लहैलहैमा रक्सी र चुरोटसँगै अन्य लागूपदार्थ सेवन गर्न थाले । त्यसपछि राति अबेरसम्म घर बाहिरै बस्ने र आपसमा झगडा गर्ने बानी पर्यो ।
पैसाको अभाव भएन
सम्राटका बुबा पाइलट हुन् । उनलाई कहिल्यै पैसाको अभाव भएन । एक्लो सन्तान भएका कारण पनि बुबाले सम्राटलाई मागे जति पैसा दिए । तर, दिएको पैसा कहाँ खर्च भयो ? कहिल्यै खोजेनन् । परिणामतः सम्राट लागूऔषध सेवनमा मस्त हुँदै गए ।
‘८/९ कक्षा पढ्दा नै बाइक चढेर स्कुल जान्थें । १० कक्षासम्म ठीकै थियो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘चुरोट–बियर पिउथें । तर, लिमिटमा ।’
२०४९ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनी होस्टल बस्न थाले । त्रिभुवन युर्निभर्सिटीमा विज्ञान संकायमा भर्ना भए । पढ्न सकेनन् । होटल म्यानेजमेन्टमा जोइन भए । भारतको पटना गएर परीक्षा दिए । कारण थियो, त्यहाँ पैसा र नाम दिए स्वतः परीक्षा उत्तीर्ण गराइन्थ्यो ।
त्यतिबेलासम्म सम्राट नराम्ररी लागूऔषधमा फसिसकेका थिए । कलेजमा दिनुहँजसो झगडा हुन्थ्यो । खुकुरी हानाहान हुन्थ्यो । कयौंपटक प्रहरीको हिरासतमा परे ।
‘त्यतिबेला आफूभन्दा हिरो कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो,’ सम्राटले सुनाए, ‘पुलिस पनि केही होइन जस्तो लाग्थ्यो ।’
बिस्तारै बुबाआमाले पनि छोराको व्यवहार बिग्रिएको बुझे । सम्राटकै कारण घरझगडा हुन थाल्यो । त्यसपछि परिवारले सम्राटलाई पढ्न स्विट्जरल्यान्ड पठाउने निधो गर्यो ।
स्विट्जरल्यान्डमा झन् बिग्रिए
अन्ततः सम्राट स्विट्जरल्यान्ड पुगे । उनलाई ‘ढुंगा खोज्दा देउता’ मिलेजस्तो भयो । त्यहाँ त झन् खान र पिउन स्वतन्त्र । पढ्नै बिर्र्सिए । उनी त झन् बिग्रिए ।
‘स्विट्जरल्यान्ड गएको एक महिनापछि हिरोइन र कोकिन सेवन गर्न थालें । खाएपछि आनन्द आउने । अर्कै संसारमा पुगे जस्तो,’ सम्राट भन्छन्, ‘नशाको मजा नै बेग्लै ।’
पाँच वर्ष स्विट्जरल्यान्ड बस्दा सम्राट झन् नशाको दलदलमा फसे । पढाइ अलपत्र भयो । पैसा कमाउने त कुरै भएन ।
‘जर्मनबाट आएको खतरनाक हिरोइन खान्थें । ओभरडोज हुँदा मुटु फुटेर मर्ने सम्भावना हुन्थ्यो,’ गम्भीर हुँदै उनले भने, ‘धन्न भगवानको कृपाले बाँचें ।’
उनलाई पढ्ने भन्दा पनि कसरी कोकिन खाने भन्ने चिन्ताले सताउँथ्यो । घरबाट पठाएको पैसाले नपुगेर स्विट्जरल्यान्डमा माग्ने बने । उनले मागेको पैसाले कोकिन र हिरोइन किनेर खाए ।
अति भएपछि सम्राटको शरीरले राम्रोसँग काम गर्न छाड्यो । स्विट्जरल्यान्डमा टिक्नै नसक्ने भएपछि सम्राट स्वदेश फर्किए । सम्राटको शरीर नै नचिनिने भएको थियो । यतिसम्म ‘रिसिभ गर्न’ एयरपोर्ट पुगेका बुबाले समेत उनलाई चिन्न सकेनन् ।
नेपाल फर्केपछि पुरानै संसार
उनी सुध्रन चाहन्थे । तर, सकिरहेका थिएनन् । नेपाल आएपछि दुई महिना घरबाट बाहिर निस्किएनन् । मन थाम्न सकेनन् । बाहिर निस्के । पुराना साथीसँग भेट भयो । फेरि सुरु भयो, पुरानै दैनिकी ।
लागूऔषध सेवन, झगडा र प्रहरी हिरासत त समान्य हुन थाल्यो । लागूपदार्थ सेवन र पुलिसको कुटाइ खाए कति कति । खानबस्न र सुत्ने समयको ठेगान भएन । सारै दुःख भएपछि सम्राटलाई लागूपदार्थ सेवन छाड्न मन लाग्यो । तर, कसरी ?
सुधार केन्द्रकाे खोजी
दुव्र्यसनीमा फसेकालाई उद्धार गर्ने सुधार केन्द्र खुलेका छन् भन्ने थाहा थियो उनलाई । उनी खोज्दै खोज्दै आफैं सुधार केन्द्र पुगे । करिब पाँच वर्षमा काठमाडौंका ७ सुधार केन्द्र धाए । तर, सुधार केन्द्रको व्यवहार मन परेन । अनेक लाञ्छना, विभेद र दुव्र्यवहारका कारण उनको चित्त दुख्यो । अनि सुधार केन्द्रबाट घर फर्किए ।
दुव्र्यसनीबाट उम्कने उत्कट चाहनाबाट प्रेरित सम्राट घर फर्किएर रोजगारीको खोजीमा निस्किए । तर, जागिर पाएनन् । मान्छेहरुले ‘ड्रग्स लिने मान्छे’ भनेर हेयको व्यवहार गर्न थाले । जुन कुरा नराम्ररी चिडिएका उनी आफैंले सुधार केन्द्र खोल्ने निधो गरे ।
सुधार केन्द्र स्थापना
ललितपुरस्थित गोदवारीमा ३ रोपनी जग्गा लिएर सम्राटले सुधार केन्द्र स्थापना गरे । विगतमा आफूले भोगेजस्तो समस्या अरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सुधार केन्द्रमा अहिले १५ जनाको उपचार भइरहेको छ । उनी अहिले सन्तुष्ट छन् । विगतलाई धिक्कार्छन्, वर्तमानप्रति गर्व गर्छन् ।
नशाले मानिसलाई अर्धपागल बनाउँछ । हिरोइन, कोकिनलगायत लागूऔषधले मानिसको ज्यान पनि लिन्छ । यसर्थ, लागूपदार्थ सेवनबाट टाढा रहन सुझाव दिन्छन्, उनी ।
बिग्रनुको दोष आफैंलाई दिन्छन्, उनी । ‘गरिब भएको भए बिग्रनथें कि !’ उनी भन्छन्, ‘अभाव नहुनु पनि पीडा रहेछ ।’ विगतमा जेजे भए पनि अहिले सम्राट खुसी छन् । उनी विगत सम्झेर होइन, भविष्यको कल्पनामा रमाउँछन् ।
उनी अचेल सुधार केन्द्रमा आएकालाई पाठ पढाउँछन् । भोगाइ सुनाउँछन् । र, पुनर्जीवन दिन्छन् । अहिले उनमा धनी हुने चाह छैन । उनले युवालाई पुनर्जीवन दिने चाहना मनभरि पालेका छन् ।
तस्विर ः किरण पन्थ
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १, २०७६, ०१:०६:००
कोरोना संकटमा फार्ममा आगलागी, १२८ बाख्रा जले